China Super-yakaderera Musoro Magetsi Magetsi Chain Hoist Vagadziri uye Vanotengesa | Chenli
SANGANO REMADZIMAI ZVINOGONESWA NETROLLEY
▲ Iyo yakajairika yeiyo yakasarudzika ye OptimaI chimiro mukupfupisa chinhambwe pakati pemuchina muviri uye wedanda matanho, anoshanda kune mashandiro mukati mefashoni yakaderera zvivakwa, kunyanya suabIe yekushandisa mune temporariIy yakamisikidzwa zvivakwa zvidyarwa kana pamasaiti apo kuwedzera kweanogadzirisa nzvimbo mukati meBiIdings iri zvinodiwa.
▲ Electric ketani hoistis chishandiso chakaringira kusimudza zvinhu zvinorema, kutakura nekuregedza, kuchengetedza michina, iine basa rakavimbika, nyore kushanda, chimiro chepamberi, diki vhoriyamu uye yakakura kushandiswa. Isu tine hunyanzvi mukugadzira uye kugadzira kweyemusoro giredhi keteni block.lever block, yemagetsi keteni hoist uye zvimwe zvinoshandiswa kusimudza.
▲ chimiro chitsva nemidziyo midiki yekusimudza pamwe nemidziyo yakakwana yekusimudza, kuendesa.
▲ ine hunhu hwekuita zvine musoro dhizaini, yekumusoro chimiro, chinoshamisa chimiro, diki diki, kutaridzika kwakakwana, hukuru hwakareba kugadziriswa nyore nyore uye kwakasimba etc.Work ine ruzha rwepasi, kugona kwakawanda, kukwanisa braking.
▲ anoshandiswa zvakanyanya mumafekitori, imba yekuchengetera nzvimbo, mashopu, chiteshi, doko, kunyanya mukusimudzira kushanda kwebasa uye kugadzirisa mamiriro ekushanda.
Zvimiro zvemagetsi keteni kukanda:
▲ Shell: Chiedza aIuminum alloy rafI shalI kugamuchirwa iyo iri Iight asi yakaoma uye yakakodzera kushandiswa mune inotyisa nzvimbo nharaunda ine yakanyanya kupisa dissipation chiyero uye ese akasimba dhizaini.
▲ Inverse phase sequence inochengetedza mudziyo: lt ndiyo iyo speciaI yemagetsi yekuisa inodzora dunhu kuti isashande kana nyaya ye wiring ikanganisa mugetsi.
▲ Limit switch: Iyo muganho switch mudziyo unoisirwa apo uremu hunosimudzwa uye wozodzora uchiita kuti mota imise otomatiki kuitira kuti arambidze maketeni kubva pakuwedzeredza kuchengetedza.
▲ 24V / 36V chishandiso: chinoshandiswa kurambidza izvo zvinobuda kuti zviitike kuitika pakuburitsa.
▲ Side magnetic braking mudziyo: Ichi chishandiso shalI ndinoona iko kubhuroka kwechinguva kuitika kune simba kurasa.
▲ Chain bag: Ino shalI kuve Iight, yakanaka uye yakasimba.
▲ Chain: Iyo ketani shalI inotora iyo yekuunzwa yokunze FEC80 yekupisa kwakanyanya-kurapaII aIuminum alloy ketani.
Yepfuura: Magetsi trolley inomhanya mhando 0.5t-10t
Inotevera: Imwe Speed ​​mhando 35t-Stationary
10 Ton Magetsi Hoist
2 Ton Magetsi Cable Hoist
Magetsi Chain Vimba 3 Ton
Magetsi Chain Hist 1000kg
Electric Chain Yakabuditsa NeMota Trolley
Electric Hoist Uye Trolley
Mini Magetsi Crane
Mini Magetsi Hoist 100kg
Diki Ramagetsi Eketuru
Imwe Speed ​​mhando 10t -electric trolley ichimhanya ...
Imwechete Speed ​​mhando15t -Electric trolley ichimhanya ...
Imwe Speed ​​Speed ​​Type 10t -hook Type
Imwechete Speed ​​mhando 300Kg-Manual trolley ichimhanya ...
Imwe Speed ​​mhando 7.5t -Electric trolley runnin ...
Imwe Speed ​​mhando 0.5t-5t -Manual trolley runni ...